Isingeniso kwiMfazwe yamaCold eYurophu
Ulwaphulo olucacileyo phakathi kobuNkokheli kunye noKomanisi
Imfazwe yeHlabathi yayiyimpikiswano yekhulu lama-20 phakathi kwe-United States yaseMerika (iU.S.), i-Soviet Union (i-USSR), kunye neentlangano zabo ngokuphathelele kwimicimbi yezopolitiko, ezoqoqosho kunye nemikhosi, esoloko ichazwa njengomzabalazo phakathi kobuxhakaxhaka kunye ne-communism-kodwa Imiba yayingumgubo ogqithiseleyo kunokuba. EYurophu, oku kuthetha ukuba iNtshona eholelekileyo e-US kunye ne- NATO kwelinye icala kunye ne-East-led lediso yaseSoviet kunye ne- Warsaw Pact kwenye.
Imfazwe yeHlabathi yaqala ukususela ngo-1945 ukuya kutsho kwe-USSR ngo-1991.
Kutheni Kuthiwa 'iMfazwe'?
Imfazwe yayibanda "ngenxa yokuba kwakungazange kubekho ukusebenzisana komkhosi phakathi kweenkokheli ezimbini, i-US kunye ne-USSR, nangona izikhwama zatshintshana emoyeni ngexesha leMfazwe yaseKorea. Kwakukho imfazwe eninzi kwihlabathi jikelele njengoko amazwe axhaswa yilo lonke icala, kodwa ngokwemigaqo yeenkokheli ezimbini, kunye neYurophu, ababini abazange balwe imfazwe rhoqo.
Emva kweMfazwe Yehlabathi II kwaphuma eUnited States naseRussia njengamagunya amakhulu empi ehlabathini, kodwa babe neendlela ezahlukeneyo zoorhulumente kunye noqoqosho-owayengumdemokhrasi wentando-ntlangano, eyona nto yokulawula ulawulo lwentando yama-communist. Ezi ntlanga zombini zazingqubana ziyesabelana, enye iphikisana nayo. Imfazwe yashiya iRussia ekulawuleni imimandla emikhulu yaseMpuma Yurophu, kunye nee-Allies ezikhokelwa yi-US ekulawuleni iWest.
Ngoxa ii-Allies zibuyisa intando yeninzi kwimimandla yazo, iRashiya yaqalisa ukwenza ama-satellites aseSoviet kwiindawo "ezikhululekile"; Ukwahlula phakathi kwababini kwabizwa ngokuba yiContain Curtain . Enyanisweni, kwakungekho nto inkululeko, nje ukutshatyalaliswa okutsha yi-USSR.
I-West yayesaba i-communist invasion, i-physical and ideological, eyayiza kubakhokela kwiindawo zobukhomanisi kunye nenkokheli ye-Stalin-eyona nto inokwenzeka kakhulu-kwaye yabaninzi, yabangela ukwesaba ukuhlalisana kwentlalo, nayo.
I-United States ibanjwe iMfundiso kaTruman , kunye nomgaqo-nkqubo wokubambathisa ukuyeka ukusasazeka kwe-communism-nayo yaguqula ihlabathi ukuba ibe yimephu enkulu kakhulu yamahlakani kunye neentshaba, kunye ne-United States imbophelele ekuthintela oomakomineni ukuba bandise amandla abo, inkqubo eyabangela ukuba I-West isekela ii-regimi ezimbi-kunye neMarshall Plan , uncedo olukhulu olujolise ekuncediseni ezoqoqosho eziwayekayo ezenza ukuba abazalwana abanokuxoxisana bafumane amandla. Amaqumrhu omkhosi asekwa njengokuba iWest ihlanganiswe ndawonye njengeNATO, kwaye i-East ibambene kunye njengeParte ye-Warsaw. Ngowe-1951, iYurophu yahlula yaba mabini amabandla, iikhokelwa yi-Amerika kunye ne-Soviet-led ledge, ngasinye sinesixhobo se-athomu. Imfazwe ebandayo yalandelwa, isasazeka kwihlabathi jikelele kwaye iholele kwisixhobo senyukliya.
Ngethuba lokuqala ababambisene nabo basebenzeleni njengeentshaba ezithile zaseBerlin Blockade. IJamani yaseMaphandleni yahlula yaba ngamaqabane amane kwaye yayihlala yi-Allies yangaphambili; I-Berlin, ehlala kwindawo yaseSoviet, yahlukana. Ngomnyaka we-1948, uStalin wagxininisa ukuvalwa kweBerlin ekujoliswe ekuqhubiseni iAllies ukuphinda axoxanise ukwahlukana kweJamani kunokuba ahlasele. Izibonelelo zazingenakufikelela kwisixeko, esithembele kuzo, kwaye ubusika kwakuyinkathazo enkulu.
I-Allies ayiphenduli ngezinye iindlela uStalin ecinga ukuba uyazinika zona, kodwa waqalisa i-Berlin Airlift: kwiinyanga ezili-11, iimpahla zagqithiselwa eBerlin ngeenqwelo ze-Allied, i-bluffing ukuba uStalin akayi kubadubula aze abangele " . Akazange. Ukuvinjwa kwaphela ngoMeyi 1949 xa uStalin wamyeka.
UStalin wabulawa ngo-1953, kwaye ithemba lokuba inkokhelo yaphakanyiswa xa inkokheli entsha uNicita Khrushchev yaqalisa inkqubo yokucima i-de-Stalinization . Ngomhla ka-Meyi 1955, kunye nokuqulunqwa kweQumrhu leWarsaw, watyikitya isivumelwano kunye neZizwe eziManyeneyo ukuba zihambe e-Austria kwaye zingenzi nxaxheba. Ukuqhawula kwaphela kwada kwade kwagqitywa i-Budapest ngo-1956: urhulumente wengqununu waseHungary, wayejongene neefowuni zangaphakathi zokuguqulwa kwezinto, wawa kunye nokuxhoxiswa kwamabutho ukuba ahambe eBudapest. Impendulo yaseRashiya yayikuba ne-Red Army ibambe isi sixeko kwaye ibeke ulawulo olutsha.
IWest yayibaluleke gqitha kodwa, ngokuphazamiseka kwantlupheko yiSuez Crisis , ayizange iyenze incedo ngaphandle kokuba i-Frostier ibe yiSoviet.
I-Crisis yaseBerlin kunye ne-V-2 Isiganeko
Ukoyika i-West Germany ezalwe ngokutsha kunye ne-US, iKrushchev yanikela imvume yokubuyisela iJamani ehlangene, engathathi hlangothi ngo-1958. Intlanganiso yeParis yeeNtetho yayidityaniswa xa iRussia ibetha indiza ye-U-2 e-US e-flying spy. I Khrushchev yakhupha ngaphandle kwendibano kunye neentetho zokungabikho kwezixhobo. Esi siganeko sasiluncedo ngaphandle kweKhrushchev, owayengaphantsi kwengcinezelo evela kuma-hardliners eRussia ngokunikela kakhulu. Ngaphantsi kwengcinezelo evela kwinkokeli yaseMpuma yeJalimane ukuyeka ababaleki ababalekela eNtshonalanga, kwaye kungekho nkqubela ekwenzeni iJamani ingathathi hlangothi, kwakhiwa iWall Berlin , umqobo opheleleyo phakathi kweMpuma neWest Berlin. Yaba ngummeli weMfazwe yamaCold.
Imfazwe yeHlabathi eYurophu kwi-60s kunye ne-70s
Ngaphandle kokubambisana kunye nokwesaba kwemfazwe yenyukliya, ukulwa kweNtsholongwane yeCold phakathi kweMpuma ne-West kwabonakalisa ngokumangalisayo emva kowe-1961, nangona iFransi elwa ne-Americanism neRussia yayichukumisa iMountain Spring. Kukho ukulwa phakathi kwinqanaba lehlabathi, kunye neCrisis of Missile Crisis neVietnam. Kwimizuzu emininzi yee-60 kunye nee-70, iprogram ye-détente yalandelwa: iindidi ezininzi zeentetho ezenze impumelelo ekuqiniseni imfazwe kunye nokulinganisa amanani eengalo. IJamani ixoxisana neMpuma phantsi komgaqo-nkqubo we- Ostpolitik . Ukwesaba ukutshatyalaliswa ngokuqinisekileyo kwanceda ukunqanda ukungquzulana ngqo-inkolelo yokuba xa uqalise iimpazamo zakho, uya kubhujiswa yiintshaba zakho, kwaye kwakungcono ukuba ungabikho umlilo ngaphandle kokutshabalalisa yonke into.
I-80s kunye neMfazwe entsha yeCold
Ngama-1980, iRashiya yabonakala iyinqobile, ngoqoqosho oluvelisa ngakumbi, iimfono ezingcono, kunye ne-navy ekhulayo, nangona le nkqubo inonakele kwaye yakhiwa kwi-propaganda. EMelika, kwakhona kwakhona ukwesaba ulawulo lwaseRashiya, lwafudukela ekuvuseleleni kunye nokwakha amandla, kuquka ukubeka ezininzi iimfosholo ezintsha eYurophu (ngaphandle kokuphikiswa kwendawo). UMongameli we-United States uRonald Reagan wandisa imali ekhuselekileyo yokukhusela, ukuqala iNqununu yoKhuselo loKhuselo ukukhusela ukuhlaselwa kweenyukliya, ukuphela koKhuseleko oluManyeneyo. Ngelo xesha, amabutho aseRashiya angena e-Afghanistan, imfazwe abaya kuyilahleka ekugqibeleni.
Ukuphela kweMfazwe yeHlabathi eYurophu
Inkokeli yeSoviet uLeonid Brezhnev yafa ngo-1982, kwaye umlandeli wakhe, ekufumaneni ukuba utshintsho lwalufuneka kwiRussia kunye nama-satellites ayenzileyo, abavakalelwa kukuba belahlekelwa ukuhlaselwa kweengalo ezihlaziyiweyo, bakhuthaza abaguquleli abaninzi. Omnye, uMikhail Gorbachev , wavuka waba namandla ngo-1985 kunye nemigaqo yeGlasnost nePerestroika waza wagqiba ukuphelisa imfazwe ebandayo kwaye "ukuphawula" umbuso we-satellite ukugcina iRashiya ngokwayo. Emva kokuvuma kunye ne-US ukunciphisa izixhobo zenyukliya, ngo-1988 wayethetha ne-UN, ecacisa ukuphela kweNtsholongwane yeCold ngokulahla i- Brezhnev Doctrine , ukuvumela ukhetho lwezopolitiko kwiindawo ezazichazwe ngaphambili kwi-Yurophu yaseMpuma. umkhosi weengalo.
Isantya sezenzo zikaGrbachev zanciphisa iWest, kwaye kwakukho ukwesaba kobundlobongela, ngakumbi kwi-East Germany apho iinkokheli zathetha ngovuko lwazo lweTanananmen Square.
Nangona kunjalo, iPoland yaxoxisana ngokukhetha ukhetho, iHungary yavula imida yayo, kwaye iNkokheli yaseMpuma ye-East Honecker yashiya xa kubonakala ukuba iiSoviet zazingayi kumxhasa. Inkokeli yaseMpuma yeJamani yomela kwaye udonga lwaseBerlin lwawa emva kweentsuku ezilishumi. IRomania yaxosha umlawuli wayo kunye nama-satellites aseSoviet avela emva kweContain Curtain.
I-Soviet Union ngokwayo yayiza kuwela. Ngomnyaka we-1991, abaqini bamakhomanisi bazama ukukhankanya neGorbachev; bahlulwa, kwaye uBoris Yeltsin waba yinkokheli. Waphula i-USSR, endaweni yokudala i-Russian Federation. Inkqubo yamaKomanisi, eyaqala ngowe-1917, yayiphelile, kwaye kwakunjalo iMfazwe yamaCold.
Ezinye iincwadi, nangona zixinzelele ukuqhubana kwezixhobo zenukliya ezazisondela ekubhubhiseni iindawo ezininzi zehlabathi, zichaze ukuba le nkqukliya yenyuke kakhulu kwiindawo ezingaphandle kweYurophu, kwaye inenekazi, ngokwenene, yayinandipha iminyaka engama-50 yoxolo nozinzo , ezahluleka kakhulu kwisiqingatha sokuqala sekhulu lemashumi mabini. Lo mbono mhlawumbi ulungelelanisa ngento yokuba ininzi yeMpuma yeYurophu yayinjalo, ekugqibeleni, ixhomekeke kwixesha elipheleleyo ngamaRussia aseSoviet.
Ukuhlaselwa kwe- D-Day , ngelixa lidla ngokugqithiseleyo ekubalukeni kwayo ekuhlahleni kweJamani laseJamani, kwakukho ezininzi iindlela eziphambili zeMfazwe yamaHlathi eYurophu, eyenza i-Allied forces ikhulule ininzi yeYurophu yaseYurophu ngaphambi kokuba imikhosi yamaSoviet ibe khona. Impikiswano ivame ukuchazwa njengokuba ithathe indawo yesigxina sokugqibela-iMvazwe yesiBini yeMfazwe yokuhlalisa uxolo engazange ifike, kwaye iMfazwe yeCold inzulu yonakalisa ubomi eMpuma naseNtshona, echaphazela inkcubeko kunye noluntu kunye nezopolitiko kunye nomkhosi. Imfazwe yeNtsholongwane iphinde ichazwe njengengqinano phakathi kwentando yeninzi kunye nekomonism ngelixa, ngokwenene, imeko yayiyinkimbinkimbi, kunye nelo 'lwedemokhrasi', olukhokelwa yi-US, lenkxaso ngokuthe ngqo kwintando yesininzi, yobuthixo obunobundlobongela ukuze kugcinwe amazwe ukuba angene phantsi kolawulo lweSoviet.
Ngaba uMarie Antoinette uthi "Bavumele Batye Ikhekhe"?
INkosana Albert, Umyeni weNdlovukazi yaseVictoria
IiYunivesithi zeLee University
Iingongoma ezintathu zePalati yokuPhatha elula
Amanqaku okuhamba ngomkhumbi kunye noTywala
I-F-22 I-Raptor Fighter Jet
I-Karakorum - IXeko leNkunzi-dolophu yaseGenghis Khan
Indlela yokwakha iprojekthi yeSayensi ye-Baking Soda Volcano
Funda i-Japanese Phrase Utsukushii
Iinyanga eziqhutywe phambili ngokusebenzisa iMpawu (iLibra ukuya kwiPisces)
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngesihogo?
I-Microtubules Inkcazo kunye nemizekelo
I-Eklesia College Admissions
Abantu bamandulo Omele Uyazi